C/Weli Gaas oo diiday ka qeyb-galka shir ka socda Muqdisho…sabab? | C/Weli Gaas oo diiday ka qeyb-galka shir ka socda Muqdisho…sabab? – Latest News
« Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay oo booqasho ku yimid Magaalada…
UAE Warns Citizens To Avoid Travel To Afghanistan, South Sudan, Somalia »
C/Weli Gaas oo diiday ka qeyb-galka shir ka socda Muqdisho…sabab?
Muqdisho (GT) Mas’uuliyin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda Puntland uu diiday ka qeyb-galka shir ka socda Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa la sheegay in loo dira farrin taas oo loogu sheegayo inuu ka soo qeyb-galo shir ka dhacaya Muqdisho oo ay isku arkayaan madaxada faderaalka,maamullada dalka ka jira iyo xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka Qaramada Midoobay.
Balse waxaa goor dhaweyd si rasmi ah u furmay shirka lugu casuumay madaxweynaha Puntland,kamna uusan qeyb-galin,inkasto ay joogan qar ka mid ah madaxada maamullada dalka ka jira.
Sababta uu madaxweyne Gaas shirkan ugu soo qeyb-gali waayey waxaa lugu sheegay arrimo la xiriira khilaafka Puntland iyo faderaalka kaas oo an wali la xalin,kaddib markii dhawaan uu madaxweynuhu shaaciyey inay xiriirka u jareen dowladda dhexe.
Madaxda maamullada ee shirka lugu casuumay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Jubba,Axmed Madoobe waxuuna soo ajibaay casuumada barqadii maanta ayuuna Muqdisho ka soo deggay.
Axmed Madoobe ayaa xilligan hareer fadhiya madaxda faderaalka isagoona ka qeyb-galaya shirka golaha ammaanka iyo madaxda Soomaalida oo ka socda Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland isagoo maalmo ka hor saxaafadda kula hadlay Boosaaso waxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kala hadlo dowladda dhexe ee Soomaaliya khilaafadka xilligan jira ee ka bilowdey maamul u sameynta gobollada dhexe ee Soomaaliya.